Iavoloha : tsy voaasa ny federasion’ny fanatanjahantena | NewsMada
Tsy fahita firy ? Tsy anisan’ireo voaasa amin’ny lanonana fifampiarahaban’ny andrimpanjakana eny Iavoloha anio ireo federasiona ara-panatanjahantena rehetra eto amintsika. Nambaran’ny tompon’andraikitra mpikarakara ny lanonana ao Ambohitsorohitra fa niainga amin’ny taratasy avy anivon’ny minisitera ihany no nanomezana ny fanasana. Avy amin’iza izany ny hadisoana na ny mety ho fanadinoana na fanilihana ?
Tsy azo hadinoina fa anisan’ny maha minisitera ny minisiteran’ny Fanatanjahantena ny federasiona rehetra. Mpiahy azy ireo rahateo ny minisitera ary tokony hiainga avy eny Ambohijatovo ny fanasana ho an’ny federasiona.
Etsy andaniny, nitondra ny laza sy ny voninahitry ny firenena teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny ankamaroan’ireo federasiona ireo. Nahafantarana an’i Madagasikara manerana izao tontolo izao. Nanova fomba fiasa izany ny minisitera sa aiza ny olana ?
Tsiahivina fa amin’ny andraikitra sahaniny, ivelan’ny fanatanjahantena no nanasana ireo tompon’andraikitra sasany eo anivon’ny federasion’ny fanatanjahantena ho avy eny Iavoloha, anio.